किन दुश्मन बने बर्षा राउत र बर्षा सिवाकोटी ? – Rastriyapatrika
किन दुश्मन बने बर्षा राउत र बर्षा सिवाकोटी ?
rastriyapema | May 13, 2019 | Comments
नायिका बर्षा राउतलाई सम्बोधन गर्दै नायिका बर्षा सिवाकोटीले लेखेको एउटा स्टाटस अहिले चर्चामा छ । दुबै नायिकाको चलचित्र रिलिज हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा नायिका सिवाकोटीले राउतको नाममा स्टाटस लेखिन् । उनले लेखिन्–‘खै कसले भनेछ हामी दुश्मन अरे । हामीले एक अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न सकेनौ अरे । हामी प्रतिस्पर्धी पक्कै हौला, एकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौ । त्यसलाई अस्विकार न तिमीले गर्न सक्छौ न मैले । एकै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टम लाग्नु स्वभाविक नै हो नी होइन र ?’